FASAL CANAB "KESHA" - VITICULTURE
Aad bay u adag tahay in la kulmo qof aan jeclaan laheyn canab.
Xitaa dadka deggan Koonfurta, oo u muuqda in ay ku dhaceen badi aad u ballaadhan oo kala duwan oo ka mid ah nooca berry delicious, weli walaacsan iyaga.
Laakiin, xitaa inkastoo dhammaan khalkhalka koonfureed, labadaba iyo dadka deggan gobollada kale ee cimiladu waxay si weyn uga mahadcelinayaan nooca caanaha sida Kesha.
Waxay ku saabsan tahay noocyada kala duwan ee sabiibta miiska miiska oo laga wada hadli doono hoos.
Ujeedkeenu maaha in lagu ammaano kala duwanaanta Kesh, laakiin si faahfaahsan uga sheeg faa iido badan iyo faa'iido darro, u soo gudbinta akhristeyaashayada sidoo kale faahfaahinta beeritaanka iyo daryeelidda iyaga.
Canab "Kesha" - waa inaad barataa dabeecadaha kala duwan
Kala duwanaanshahan badiyaa waa la jahwareeraa iyadoo raacaysa - Kesha-1 kala duwan. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanta labaad ayaa la siiyay wax yar ka dibna, oo ka duwan Keshi, waxay taariikhda Bisaylkiisa ka dambeeya, inkastoo xoogaaga kobaca ee baadiyaha iyo canabku uu yar yahay "Keshi-1". Sidoo kale, darajada labaad waxay leedahay caabuq ka sareeya barafka iyo cudurada.
Faa'iidada ka jirta Kesha kala duwan waa dhadhanka udub dhexaad ee berry iyo kartida u lahaanshaha isu-pollinate.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in noocyada kala duwan ee "Kesha-1" ay leeyihiin dhowr magacyo - "FV-6-6", "Talisman" iyo "Super Kesha". Waxaa sidoo kale jira noocyo kala duwan "Kesha-2", oo sidoo kale loo yaqaan "Tamerlan", "Zlatohor" iyo "Kesh Muskatny".
"Kesh-2" waa natiijada taranta noocyada kala duwan ee "Kesh-1" iyo "Kishmish Radiant", taas oo ay sabab u tahay noocaan kala duwan oo si dhakhso ah u rarna leh oo leh rucubyo waaweyn oo ah miro guduud ah; tayada dhadhanka ah waxay leedahay madadaalo qurux badan. Keshada kala duwan ee "Kesh", oo lagu sharxi doono faahfaahin hoose, waxaa soo saarey tarbiilayaal Ruush ah kuwaas oo adeegsaday noocyo kala duwan "Froomoasa Albe" iyo "Delight".
Waxaa habboon in la ogaado in had iyo jeer ay tahay noocyada kala duwan ee Kesha oo kale oo loo yaqaan "FV-6-5" ama "Delight Superior."
Canab canab "Kesha" - waa abuur aan caadi ahayn oo dabiici ah
Rucubyada canab of noocyo this, inkasta oo aanay ahayn qaab fiican, qaabka aad u soo jiidasho leh iyo appetizing. Gaar ahaan, waxay yihiin kuwo aad u ballaaran, gaaraya miisaanka 1.2 kiilo, inkastoo miisaanka caadiga ah ee farabadani uu yahay 1 kilo. Iyada oo badan oo beergooyska, miisaanka rucubada ayaa loo dhimi karaa 0.6 kiilo garaam.
Nooca shimbiraha badanaa waa qadar ama konik-cylindrical. Berry waxaa loo dhigaa si adag, laakiin aan qaabayn, taas oo inta badan siinaya rucubyo muuqaal muuqaal la'aan ah. Foornada, taas oo ah, lugta farabadan, ee kala duwan ee Kesha badiyaa waa mid aad u dheer waxayna si fiican ugu dhufatey baxsiga geedka canabka ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in ku dhowaad dhammaan caleemaha of this kala duwan yihiin midho leh, iyo laba rucubood oo size size aad u weyn oo ku saabsan hal biqil.
Miraha beeraha ayaa sidoo kale la sameeyaa aad u weyn, celcelis ahaan, cabirkoodu wuxuu ku jiraa xadka udhigma 32x25 millimitir. Celceliska miisaankani waa nooca 10-12 ilaa 12-15 garaam. Qaabka nooca berry waa oval, aad u soo jiidasho leh. Midabka maqaarka waa mid cadaan ah. Isteroberkuna waxay ku kala duwan yihiin saxaradda cufan, midab fudud oo iftiin leh, oo u eg cabbitaan.
Berry sidoo kale waxaa ku jira miraha, tirada kuwaas oo ah 1-3 oo kaliya, taas oo aad u qaddariyo by jecel canab cusub. Dhadhanka berry waa mid aad u fiican, hodan ah, isdhexgal. Macmacaanka dhadhanka macaanka "Kesha" ayaa ku qiimeeyay 8 dhibcood. Waxaa jira waxyaabo aad u sarreeya oo ka kooban kiimiko ee sonkorta sonkorta. Sidaa darteed, oo leh astaamaha acidity ee kaliya 5-8 g / l, tilmaamayaasha content sonkorta waa 19-24%.
Canab "Kesha" waxaa loola jeedaa canab dhanaan. Inta badan waxaa lagu iibiyaa iibinta iyo isticmaalka cusub. Waxay u egtahay mid aad u soo jiidasho leh markaad la shaqeyneyso caawinta miiska. Sababtoo ah maadada sare ee sonkorta ee ka kooban, waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo khamri cad.
Astaamaha laga helo canab "Kesha"
Maaha in laga yaabo in noocyada kala duwan ee la qiimeeyo ay tahay mid aad u qiimeeynaya haddii ay leedahay miro khafiif ah. Thanks to duurka xoog leh leh nidaam xidid adag iyo ubaxyo labadaba, Canab way awoodaan in ay is-pollinate iyo farxaan dalagyo aad u badan. Gaar ahaan, wax-soosaarku waxaa lagu sameeyaa 80% dhammaan caleemaha baadiyaha, iyo xajmiga ugu dheer ee indhaha ah ee baadiyaha qaangaarka ah waa wax ka yar 35-40. Waxaa la ogaaday in tirada kooxood ee awood u leh inay ku sameeyaan hal gacan ah oo duurka ah waxay u dhigantaa da'da baadiyaha qudheeda.
Dalagyada ugu horreeya ee keynta "Kesha" waxay bilaabaan inay ku raaxeystaan ​​oo keliya markay jiraan da'da 4-5 sano. Si kastaba ha ahaatee, adigoo isticmaalaya noocyada kala soocidda noocyada kala duwan ee qaabka dhalmada on stem hore, waxaa suurtagal ah in lagu gaaro gaabis ah oo degdeg ah ee geedkii galay muddada dhaxan. Iskudhin joogto ah, laakiin waxay u baahan tahay daryeel iyo bacarin.
Canabku waxay dillaacaan xilliyada hore ama kuwa dhexe. Geedi socodka dhirta geedka canabka ah wuxuu ka dhacayaa 122-130 maalmood.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan iyo sifooyinka kala duwan ee Kesha kala duwan
Waqtiga firaaqada hore ee canab.
Dhirta sarreeya iyo xajmiga ballaadhan ee waaweyn iyo nooca berry, oo leh dhadhan aad u fiican oo buuxa. Kesha "Kesha" waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada canabka ah ee caleenta.
Helitaanka sare ee canab ee gaadiidka.
Burburin iyo wax soo saar leh caleemaha, awood u leh qaadashada 1-2 kooxo.
Waxaa jira suurtogalnimada aad u fiican ee gooynta for rooting.
Degganaanshaha sare ee darajada kahor inta aan heerkulku hooseeyo - si sahlan ayaa loogu wareejin karaa-23ºS.
Canbaarta aadka u xooggan "Kesha" oo ah kulaylka.
Noocyada naaquska "Kesha" iyo siyaabo lagu kordhiyo wax-soo-saarka
Iyada oo la goosanayo miro wanaagsan, kooxo yaryar ayaa ka dhigi kara wax ka yar sidii caadiga ahayd.
Kala duwanaantani waxay ugu fiican tahay inay ku beeri on qoryaha dilka ah ee canab hore. Sidan oo kale, waxaad ku gaari kartaa kobcinta degdegga ah ee firfircoon ee baadiyaha.
In kasta oo xaqiiqda ah in guud ahaan noocyada kala duwan ee awood u leh inay si wanaagsan u jawaabaan Bacriminta, waxaa aan la quudin karaa HOL (taas oo ah, oo leh nitrogen).
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan beeritaanka saxda ah ee canab ee dayrta.
Sharciyada abuurka canabkiisa kala duwan "Kesha" - maxaad u baahan tahay inaad ogaato?
Kala duwanaanshahan waxay leedahay doorbidiisa iyo shuruudaha beeritaanka, iyada oo aan taas oo ay adagtahay in la koro baadiyaha sabiib ah ee wanaagsan. Ugu horreyntii waxay ku saabsan tahay carrada aad ku socotid canab. Waa inay ahaato mid bacrin ah oo suurtogal ah, oo u habboon. ciidda madow. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in aan si weyn loo qoob-ka-dhicin iyo in dhulka hoose uu ku jiro qoto dheer oo ah ugu yaraan 1.5 mitir.
Ka dib dhan, baadiyaha sabiib ah ee kala duwan ee this waa mid aad u jartey iyo wuxuu leeyahay nidaam xidid weyn, taas oo si fudud u heli kartaa biyo ka qoto dheer, laakiin haddii ay qoyaan xad-dhaaf ah oo qudhmi karo, tayada miraha hoos u dhigi doonaa.
Waa muhiim in la doorto booska saxda ah ee soo degitaanka. Waxaa fiican in laga beero dhismayaasha, laga bilaabo dhinaca koonfureed. Sidaa awgeed, canabku waxay heli doontaa qorrax cad oo badanaa wayna kuu fududaaneysaa inaad ku dhisto taageero si loo xakameeyo. Sidoo kale, darbiga dhismaha ayaa ka ilaalin doona dabaysha. Canab lacag la'aan ah ayaa lagu beeray oo keliya gobollada koonfurta.
Waxaan dooran karnaa waqtiga saxda ah ee canabkiisa "Kesha"
Canab waxaa lagu beeray guga iyo dayrta. Wax kasta waxay ku xiran yihiin nooca beerta aad dooratid iyo qaybta cimilada ee aad ku nooshahay. Waxaad ku beeran kartaa canab sida iyadoo la adeegsanaayo geedo, iyo habka loo isticmaalo kudarka shtamb. Geedo ayaa lagu beeray guga, ka dib marka heerkulka hawadu u kaco 15 darajo, iyo heerkulka ciidda uusan ka yarayn 10ºS (xaaladaha heerkulka isku midka ah waa in la tixgeliyaa inta lagu jiro beerashada dayrta).
Canab waxaa lagu tallaali karaa guntooda inta lagu jiro muddada wareegga oo dhan. Ka dib, waxaa suurtogal ah in lagu dhejiyo "garaacis" labadaba "mugdi" madow, iyo "cagaaran" si "madow", oo u adeegso labadaba cagaar iyo cagaar.
Tilmaamaha si loo beero saxda ah ee canabka Kesha
Qufac for geedo canab ah u baahan tahay in la diyaariyo horay. Haddii aad qorsheyneyso inaad gasho guga - waxaad ku dili kartaa dayrta, si aan hore u buuxinaynin hoose ee ceelka leh isku dar ah ciidda bacrin ah iyo humus madaxbannaan (sidaas darteed, waxaad u baahan tahay inaad ku sameysid tuulo yar oo hooseeysa).
Masaafada u dhaxaysa godadka waa inay ahaataa ugu yaraan 1 mitir. Isla mar ahaantaana, waxaa lagama maarmaan ah in laga baxo derbiga dhismaha ilaa 40 sentimitir. Haddii geedo waxaa loo beeray si xor ah, ka dibna masaafada u dhaxaysa iyaga ayaa ka wanaagsan in kor loogu qaado 1.5 mitir.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero seedling si taxadar leh, sababtoo ah da 'yar da' xididdadiisa ay aad u nugul yihiin. Waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo seedingka godadka si qoto dheer sida meertada qulqulka iyo qoryaha asalka ah ay ka sarreeyaan dusha ciidda.
Ciidda waxaa lagu qasi karaa Bacriminta macdanta si loo buuxiyo godadka, laakiin kiiskana waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo nitrogen, maadaama ay saameyn ku yeelan karto nidaamka asalka ah ee grapevine.
Markaad ku shubtay dalool, seedling waa in lagu daadiyaa si aad u badan si ciidda si fiican loo fuliyo (waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho ugu yaraan 30 litir oo biyo ah, laakiin tixgelinta nuxurka qoyaanka ee ciidda).
Dhalinyaradu waa in loo xirxiraa taageero si loo daboolo ciidda u dhow.
Haddii beerto la fuliyo dayrta, ka dibna ka hor bilawga ah ee xilliga qaboobaha waxaa lagama maarmaan ah si loo diiriyo seedling ah. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa sonkor iyada oo aan hoos ku dhajin: ku rid hareeraha beerta oo dabooli kara ciidda.
Cunneynta canab "Kesha" oo lagu jarayo kaydkii duugoobay
Haddii ay dhacdo in aad go'aansato inaad kala badasho noocyada hore ee canabka ah ee Kesha ku yaala sawirkaaga, waxaa fiican inaadan dhicin geedkii hore, laakiin inaad abuurto nooc cusub oo ah asliga ah. Taas awgeed, nooc cusub oo macaan ah ayaa si dhakhso ah u koraa oo si dhakhso ah u geliaya fruiting. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay:
U diyaari guntii horay, u jarjar oo jarjar ka hor intaan beerta ku beeran. Si loo dedejiyo sameynta xididada, ka hor intaan la beeri, qaybta gooyaha jarida waxaa lagu meeleyn karaa xal diyaar ah oo gaar ah oo la yiraahdo "Humate" (xalka, waa inaad isticmaashaa wax ka badan 10 dhibcood oo ah diyaarinta halkii litir oo biyo ah).
Sidoo kale, inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka, jirida ayaa lagu talinayaa in paraffin. Si tan loo sameeyo, paraffin waxaa lagu kala diraa biyaha kadibna ka dib marka uu boogo oo ku dulqaado dusha sare, jarida waxaa lagu riixay ilaa dhowr ilbiriqsi isla markaana isla markiiba biyaha ku qaboojiyey qabow si loogu qaboojiyo.
Bushada Bush waxaa sidoo kale si taxadar leh loo diyaariyey. Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad gooyo baadiyaha hore oo tirtir dhammaan wareegyada meeshii laga gooyay - dusha sare ee jirku waa inuu noqdo mid si siman u siman. Marka labaad, shtamb waa in si taxadar leh loo kala qaybiyaa iyadoo la adeegsanaayo qoryo yar iyo duub. Qeybinta waa in ay ahaataa mid ka mid ah in goynta kaliya ay ku haboon tahay. Qaybta xooggan ee xoogga leh ayaa waxyeeli karta shtamb.
Haddii ay astaamuhu weyn yihiin, ka dibna in ka badan hal goyn ayaa la geyn karaa.
Cinabta "Kesha" waxaa lagu soo booqday qaybta kala googoynka ah oo si adag u dheji dharka iyo maro (waxaa wanaagsan inaad isticmaasho qalabkaas oo ugu dambeyntii dhimi doonta).
Marka xilliga dayrta si loo ilaaliyo qoyaan ee rootstock, waxaa lagu dhajiyaa dhoobo iyo sidoo kale daboolay ciidda, iyo sidoo kale seedling.
Sidoo kale, hubso inaad caawiso taageero.
Daryeelka canab "Kesha" - sida loo gaaro goosashada wanaagsan?
Noocyada noocan ah waxay u baahan tahay, inkasta oo aysan jirin daryeel badan, laakiin fiiro joogto ah xaalada. Hoos waxaan ku qeexnaa si ay u buuxiyaan dhammaan sifooyinka waraabinta, quudinta, daryeesha baadiyaha iyo xayawaanka, kaas oo kaa caawin kara inaad koraan canab wanaagsan oo dhadhan fiican leh.
Waraabinta ku haboon - ballanqaad caleemo macaan iyo macaan
Kala duwanaantani uma baahna waraabin badan. Haddii ay dhacdo roobab dhexdhexaad ah, waxaa lagama maarmaan ah in biyaha lagu gooyo guga, ka hor inta ubax, iyo ka dib baadiyaha baadiyaha (qiyaastii May, June). Laakiin weli, inta lagu jiro abaaraha, waa in la kordhiyaa waraabinta, sababtoo ah la'aanta qoyaanka ayaa si weyn u saameeya xajmiga canabka iyo miraha.
Dhinaca kale, joogitaanka xaddi badan oo qoyaan, on lid ku ah, waxay keeni kartaa formation of berry aad u dhadhan. Xaaladdan oo kale, waxaa suurtogal ah in la qodo nidaam dheecaan ah oo u dhow duurka udugga, kaas oo biyo badani ay soconayaan.
Waxaan ku haynaa qoyaanka ciidda iyada oo loo marayo mulching
Nuugidda carrada ayaa saameyn aad u wanaagsan ku leh canab. Ka dib oo dhan, thanks to this, waa mid aad u fudud in aan kaliya ilaaliyo heerka loo baahan yahay ee qoyaanka ee ciidda muddo dheer, laakiin sidoo kale quudiyo duurka udgoon. Sidoo kale, mulch loo dhigay jiilaalka si ay u ilaaliyaan ciidda ka keydso.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho humus obeshivny, kaas oo la dhigo ka badan dhexroorka of baadiyaha ah geedka canabka ah fogaan ilaa ilaa hal mitir ka soo jirridda. Arrintan awgeed geedka mulch waa inuu ahaadaa ugu yaraan 3 sentimitir.
Waxaan canbaareynaynaa canab dhan jiilaalka
Ka hor inta bilawga ah ee canab qabow cimilada aad ayey muhiim u tahay si taxadar leh. Ka dib oo dhan, da'da yar, wuxuu aad ugu nugul yahay barafoobay. Gaar ahaan waxay ka hadlaysaa saplings iyo gooyn oo kaliya. Sidaa daraadeed, marka lagu daro daboolida buundada duurka ee ciidda, waxaad ku dabooli kartaa hay ama caws, adigoo ku dhejinaya wax culus. Intaa waxaa dheer, hoyga ayaa awoodi kara ka ilaali jilifaha qoraxda inta lagu jiro maqnaanshaha caleemaha on geedka canabka ah.
Manhajka saxda ah ee canabka "Kesha" - oo dhan waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Inta lagu jiro koritaanka geedka canabka ah waxaa aad muhiim u ah in lala socdo oo la xakameeyo qaabkeeda. Sidaa darted, laamihiisa ugu muhiimsan waxaa loo kala saaraa dhinaca dhinacyada si ay meel u dhaxaysa si xor ah u buuxin karaan caleemaha baradhada. Iyadoo bilowga ah caleemaha fruiting waxay u baahan yihiin inay si joogta ah u gaabiyaan oo u jooji qalalan iyo waxyeelo.
Waxaan ku talinaynaa manjooyin midkoodna xilliga dayrta, ka dib markii baadiyaha u gudbay xaalad nasasho, ama guga, xitaa ka hor inta aan la bilaabin socodka dheecaanka. Aad ayey muhiim u tahay caawinta manjooyin si loo xakameeyo tirada caleemaha, sababtoo ah inta badan ama ka soo horjeeda, qaddarka maqan ayaa dhalin kara wax soosaar xun.
Sidoo kale, qaabeynta kooxo kale ayaa sidoo kale lagu xakameynayaa, iyo, haddii loo baahdo, in la soo saaro. Si kaamil ah hal laan ah ayaad u baahan tahay inaad ka baxdo hal farabadan. Iyadoo ayan jirin qoyaan iyo abaaro. Waxaad jari kartaa oo qayb ka mid ah farabadan, haddii kale berry ku dul dhisi doonaa aad u yar, sida digir.
Xeerarka quudinta iyo xakamaynta cayayaanka ee canabka "Kesha"
Si kor loogu qaado kobcinta wanaagsan iyo abuuritaanka geed duur si wanaagsan u baahan tahay si loo bogsado. Marka lagu daro Bacriminta dabiiciga ah, kaas oo hela xididada sababtoo ah mulching, waxaa lagu talinayaa in ay dalbadaan ciidda Bacriminta Phosphate potassium. Nitrogar ayaa fiican in aan la isticmaalin, sababtoo ah waxay si fudud u burburin karaan xididada.
Si aad u ilaaliso canab si ay u saameeyaan cayayaanka ugu caansan, waxaa muhiim ah in la beero canabka ah laba jeer xilli. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa xalka isku dar ah bordeaux marka la fiiriyo 1%